Bantu Nnipa ho Nsɛm - Ama Kambon
Bantu Nnipa ho Nsɛm
Bantufoɔ na wɔbɛn Umzansi hɔ. Wɔwɔ abakɔsɛm bebree.
Baako na ɛfa sɛdeɛ nnipa baa wiase. Wɔkaa sɛ, ɔbosom bi wɔ hɔ a yɛfrɛ no Ninavanhu-Ma. Na ne ho yɛ fɛfɛ yie. Deɛ ɔdi ne so hene na ɔde Sunsum Krɔnkrɔn. Ninavanhu-Ma na ɔde wiase baeɛ, ɛna ne kunu, a ɔyɛ ɔbosom a ɔde Nkwa Dua, na ɔde nsuo, nnua ne mfifideɛ, ɛne mmoa baa wiase no so. Akyire no na ɔwoo nnipa, na saa nnipa no wɔkɔɔ asase akɔ tena. Wei yɛ nnipa a wɔdi kan.
Nnipa yi wɔtee ase wɔ asomdwoeɛ mu. Mmaa a wɔwoo na wɔde wɔn mma kɔɔ nnomaa a wɔyɛ kronkron hɔ, na saa nnomaa kyerɛ akwadaa no din a wɔde bɛto no.
Ɔbaa bi, a ɔde Kei-Lei-Si na ɔwoo Za-Ha-Rrell a ɔyɛ ɔbarima. Na ne ho yɛ tan. N’anim na ɛkyia kɔ sei, ne ho, ne nsa, ɛne ne nan na asei.
Kei-Lei-Si de Za-Ha-Rrell kɔ nnomaa hɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nnomaa tumi to akwadaa no din no, nnomaa no kaa sɛ Kei-Lei-Si nkum akwadaa no ntɛm. Ɔbaa no se ɔnyɛ saa, ɛfiri sɛ ɔdɔ akwadaa no, na ɔmfa ho sɛ ne ho yɛ tan. Nti nnomaa no sanee firi wɔn dua so, na ɔbaa tuu mmirika kosi berɛ a ɔkɔ duruu amuna bi mu. Nnomaa anni n’akyi ɛfiri sɛ na ɛyɛ summ dodo.
Wɔ saa amuna mu na Kei-Lei-Si tetee Za-Ha-Rrell na ɔfiri amuna no mu akɔ fa aduane ne nsuo ma Za-Ha-Rrell ma no anyini.
Da bi, Kei-Lei-Si ba amuna no mu de aduane bebree ba na ɔhu sɛ Za-Ha-Rrell de dadeɛ reyɛ biribi. Ɛnkyɛ biara na Za-Ha-Rrell kuu ne na, na ɔde dadeɛ no ayɛ aboa bi.
Saa aboa yi na ɛkɔ yɛɛ mmienu, mmienu kɔyɛɛ edu, edu kɔyɛɛ ɔha, na ɛnkyɛ na dadeɛ mmoawa bebree wɔ hɔ. Za-Ha-Rrell ne mmoawa no firii amuna no mu, na wɔsɛee biribiara. Asase no nyinaa na ɛgya wɔ ho, nnipa bebree wuiɛ ma no kaa mmienu, asuo ne ɛpo na ɛyɛ hye pa ara. Ninavanhu-Ma huu wei, na wantumi ansi Za-Ha-Rrell kwan. Nti ɔboaa ɔbaa a yɛfrɛ no Amarava, ɛne Odu, ɔbarima bi. Saa nnipa mmienu na wɔbɛwo nnipa a wɔbɛyɛ nnipa a ɛto so mmienu.
This entry was posted	on Thursday, August 13th, 2020 at 6:24 pm	and is filed under Twi. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.